Ndị debanyere aha YouTube n'efu | Ọdịnaya YouTube nwere n'efu
Want chọrọ ndị debanyere aha YouTube na YouTube mmasị n'efu?
Want chọrọ ndị ọzọ ndị debanyere aha na ntinye aka na vidiyo YouTube gị? Tinye URL ọwa YouTube gị ka ịbanye wee malite!
Nweta ndị debanyere aha YouTube ugbu a! or Zụrụ ndị debanyere aha YouTube
Anata ndị debanyere aha YouTube, ma ọ bụ nwalee ndị debanyere aha anyị, nlele na mmasị maka uto ngwa ngwa!
Nbanye & Banye
Banye & nbanye na-ewe 30 sekọnd!
Mee atụmatụ anyị kachasị ewu ewu ma ọ bụ dị irè, ma ọ bụ nwaa atụmatụ akwụ ụgwọ.
Lelee Ọwa Gị Too
Lelee ndị debanyere aha maka ọwa gị na vidiyo na-amasị gị ka ịbawanye!
Ka m ugbu a!
Atụmatụ efu & ụgwọ
Atụmatụ ego na ọnụahịa na ọnụahịa iji gboo mkpa gị
Free ruo mgbe ebighị ebi!
Nweta ndị debanyere aha 5 n'ime awa iri na abụọ
Ndị debanyere aha bụ Njide Obere
Ịdenye aha na ị ga -amasị vidiyo 6
I Ji Aka Mee Atụmatụ
Mee ka 1x rụọ ọrụ Kwa Oge 12
Ọnụ ndị debanyere aha ga -abụrịrị ọhaneze
Ga-enwerịrị vidiyo vidiyo 1+
Kwụsị iji Mgbe Ọ Bụla!
Tinye ọrụ ugbu a
Nweta ndị debanyere aha 10-15 kwa ụbọchị!
Ndị debanyere aha bụ nnukwu njide
Ịdenye aha na ị ga -amasị vidiyo 0
Atụmatụ ahụ bụ 100% Akpaaka
Na-arụ ọrụ nke ya kwa ụbọchị
Kagbuo Oge O bula!
Na The Fast Track
Nweta ndị debanyere aha 20-30 kwa ụbọchị!
Nweta ndị debanyere aha 40-60 kwa ụbọchị!
Ụzọ 15 iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu maka azụmahịa gị
Ị maara na enwere ndị ọrụ YouTube ruru ijeri 1.86 n'ụwa niile n'afọ 2021? 18% nke ndị mmadụ na -eji YouTube ọkachasị soro ụlọ ọrụ na ụdị.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ a na -eme ka o doo anya na ọ bụrụ na gị dị ka onye ọchụnta ego anaghị eji ike YouTube eme ihe, ị ga -efufu ọtụtụ! Ọdịnaya vidiyo bụ ọdịnihu. Ọ na -enyere aka ịgbasa iru gị na iwulite mmata akara. Mana site na asọmpi ịkpụ akpịrị, olee otu ị ga-esi pụọ n'oké osimiri nke ọdịnaya vidiyo a na-enweta ngwa ngwa?
N'ime blọgụ a, anyị achịkọtala ndụmọdụ na atụmatụ 15 bara uru iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu ka iburu azụmahịa gị gaa n'ọkwa ọzọ. Ka anyị maba n'ime mmiri ozugbo!
1. Rịọ ndị na -ege gị ntị ka ha denye aha ha
Dị ka ihe na -ada ụda ka nke a nwere ike ịda, naanị ịgba ndị na -ege gị ntị ume ka ha denye aha na ọwa gị nwere ike bụrụ naanị ihe ọ ga -ewe iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu. Ọ dị ka otu esi etinye CTA (Oku na -eme ihe) na njedebe nke blọọgụ blọgụ gị, ibe mbata ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike bido vidiyo gị site n'ịjụ ndị na -ekiri gị ka ha denye aha na ọwa gị ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ ọdịnaya gị n'aka gị mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị chere ịmalite vidiyo site na ịrịọ maka ndenye aha ga-eme ka ị hụ na ị bụ ahịa-y, ị nwere ike mee ya na njedebe vidiyo ahụ. Echefula igosi ihe kpatara ọwa gị ji baa uru ịdebanye aha yana ọdịnaya ị na -eweta na tebụl maka abamuru ndị na -ekiri gị. Bụrụ onye eziokwu ma gosi ha ihe ntinye aka ha pụtara nye gị yana otu o si enyere gị aka ịme ọdịnaya kacha mma dị ka onye okike.
2. Mepụta Na-akpali Okwu
Nke a nwere ike iyi ihe enweghị isi mana ọ ka kwesịrị ikwu ya. Ọtụtụ ndị okike YouTube na -eche na ha nwere ike bụrụ mmetụta YouTube ọzọ na -esote site na biputere ọdịnaya nkezi. Mgba ọkụ akụkọ: ị nweghị ike! Ịntanetị jupụtara na vidiyo na ọdịnaya nke ụdị niile. N'inwe ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ, ị ga -enwe ike ịnye ndị na -ege gị ntị ihe pụrụ iche ka ha lelee ọwa gị wee denye aha ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha na -enwekarị nhọrọ ịkwaga ọwa kacha mma.
Cheta ime nnukwu ntọala tupu ị chee maka imepụta vidiyo ọzọ. Kama ịmegharị ihe onye ọ bụla ọzọ na ụlọ ọrụ gị na-eme, chee echiche n'ime igbe wee wepụta echiche ọdịnaya gị pụrụ iche. Lezienụ anya na sekọnd 10 mbụ nke vidiyo gị ka ha nwere ike ịdọrọ ndị na -ekiri gị ma ọ bụ wepụ ha.
3. Na-agbanwe agbanwe
Jụọ onwe gị. Kedu ọwa ị ga -achọ ịdenye aha na ya? Otu na -ezipụ otu ugboro n'ime ọnwa naanị ịga AWOL? Ma ọ bụ, ọwa ọzọ na -ebipụta ugboro abụọ n'izu na -aga n'ihu? Anyị niile maara azịza ya - anyị na -ahọrọ onye na -emelite ọwa ha oge niile yana ọdịnaya ọhụrụ maka ndị na -ekiri ha. Dị ka onye okike, ndị na -ege gị ntị na -atụ anya ka ị bipute n'oge iji mee ka ha tinye aka na -adọta ndị na -ekiri ọhụrụ. Ka ndị debanyere aha YouTube na -akwụghị ụgwọ, ka YouTube na -enwekwa mmasị na ya. Mmeri!
Inwe usoro ị biputere ọdịnaya gị na -emekwa ka ị hazie ma na -arụpụta nsonaazụ. Ọ bụghị iwu na ị ga -anọdụ n'ihu kọmpụta ka ị bie ndụ wee biputere ya. Ị nwere ike iji ngwaọrụ njikwa mgbasa ozi na -enye gị ohere ịhazi vidiyo gị nke enwere ike ibipụta ma emechaa.
4. Kwalite ọwa YouTube gị n'ofe nyiwe ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị nwere weebụsaịtị, ụzọ dị mma iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu bụ site n'ịkwalite okporo ụzọ na -agbanwe agbanwe na weebụsaịtị gị. Kwalite ọwa YouTube gị na webụsaịtị gị. Ọ bụrụ na ị na -eji plugins ziri ezi, ndị na -ege gị ntị nwere ike pịa bọtịnụ wee gaa na peeji YouTube gị ka ịlele ọdịnaya gị. Ị nwekwara ike ịtụle itinye njikọ YouTube gị na blọgụ blọgụ gị iji rata ndị na -agụ gị ka ha gaa na ibe ahụ.
Nnukwu aghụghọ ọzọ bụ site n'ịkwalite ọwa YouTube gị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ dị ka Twitter, Facebook, Instagram na LinkedIn. Mgbe ọ bụla ị nwere vidiyo ọhụrụ na -abịa, ị nwere ike ịkekọrịta trailer ma ọ bụ iberibe ya na akụkọ Instagram gị iji wulite atụmanya. Ọ bụrụ n'ị chịkọtara ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ dị mma na nyiwe ndị a, na ha hụrụ ihe ị na-eme n'anya, ọ ga-abụ obere oge tupu ha aghọọ ndị debanyere aha gị ogologo oge.
5. Tinye akara mmiri na vidiyo gị
Ndị okike ọdịnaya na YouTube nwere ike tinye obere akara mmiri na vidiyo niile ha mepụtara. Ọtụtụ mgbe ndị na -emepụta ọdịnaya anaghị aghọta na nhọrọ akara mmiri dị n'elu ikpo okwu. Ọ bụ obere akara ngosi na-efegharị n'akụkụ aka nri ala nke vidiyo gị. Ị nwere ike hazie ya na akara mmiri akara gị ma ọ bụ jiri akara mmiri yiri bọtịnụ ndenye aha ndabara YouTube.
Ọ bụ ihe nwute, ọtụtụ oge akara akara mmiri nwere ike ghara ịhụ ya ma ọ bụ na ọ gaghị akpali ndị na -ekiri ka ha mee ihe ọ bụla. Anyị na -atụ aro ka ị rapara na bọtịnụ denye aha uhie nke YouTube na -ejikarị. Nke a na -eme ka ọ dịrị ndị na -ekiri ya mfe ịhụ, ha nwekwara ike pịa ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịhazi, ị nwere ike pịa Nhazi na menu wee họrọ Nhazi.
6. Nye ihe nlele maka ihe na -abịa
Ọmarịcha ụzọ iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu bụ site n'ime ka ndị na -ekiri gị nwee ọ andụ na ọdịnaya nke ị na -eme riri ahụ. N'ihi na, ozugbo ihe masịrị ha masịrị ha, ọrụ gị ga -ekwu okwu niile, ha ga -arapara n'ahụ maka ihe ndị ọzọ. Usoro amamihe nke ndị nrụpụta YouTube guzobere nke ukwuu na -ebuga iji mee ka ndị na -ege ha ntị tinye aka bụ site n'ịrụpụta atụmanya maka vidiyo ọzọ.
Vidio egwu ọhụrụ, mwepụta ngwaahịa ọhụrụ, ihe ọhụrụ maka ngwaahịa gị, ọrụ ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụna mmekorita ihe ịtụnanya na kpakpando ama ama! Ihe ọ bụla ọ bụ, cheta ịrata ndị na -ege gị ntị site n'inye ha ihe ngosi nke ihe vidiyo gị ọzọ ga -abụ. Ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ gị nke ọma, ị nwere ike ijide n'aka na ndị na -ekiri gị na -eguzosi ike n'ihe ga -anọ na -ekiri vidiyo na -esote na iku ume na -enye gị mmasị YouTube n'efu.
7. Mepụta listi ọkpụkpọ iji mee ka ndị na -ekiri gị nwee nko
Ị nwere setịpụrụ vidiyo a ga -ahazi nke ọma site na listi ọkpụkpọ? Ikekwe ị na -enye nkuzi ajụjụ wee kpuchie otu isiokwu n'otu vidiyo. Ma ọ bụ, ị nwere set nke webinars? Ihe ọ bụla ọ nwere ike ịbụ, listi ọkpụkpọ na -enye gị ohere itinye ụkwụ gị kacha mma site n'igosi ndị na -ekiri gị na ọdịnaya ga -aga n'ihu. Site na ịmepụta listi ọkpụkpọ, ị na-eduzi ha site na njem ogologo oge wee rịọ onye na-ekiri ya ka ọ rie nri.
Uru ọzọ nke listi ọkpụkpọ bụ na ha na -abawanye oge nlele ọwa gị. Vidiyo ndị ahụ na -aga n'ihu na -akpọ ọnọdụ 'AutoPlay' n'usoro ahazi. Nke a yiri nnọọ ka ọgbọ narị afọ ga -esi jikọta usoro Netflix. Site na listi ọkpụkpọ YouTube, ị ga-enwe ike nweta otu agụụ na nsonaazụ, na-enye ọwa gị ọtụtụ ihe kpatara ị nweta mmasị YouTube n'efu.
8. Jiri kaadị na ngwụcha ihuenyo kwalite vidiyo ndị ọzọ
Ihuenyo ikpeazụ na kaadị bụ ngwaọrụ dị ike nke na -eme ka ịkpọ oku gị rụọ ọrụ karịa. Dị ka aha ahụ na -egosi, ihuenyo njedebe bụ onyonyo na -abịa na njedebe vidiyo gị nke enwere ike jụọ ndị na -ekiri gị ka ha denye aha ha. Ma ọ bụ, ịnwere ike iji ya kwalite weebụsaịtị gị ma ọ bụ tụọ ndị na -ege gị ntị na vidiyo na -esote. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịlaghachi tinye ihe ngebichi ikpeazụ na vidiyo ochie ndị etinyerela na ọwa gị. Nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu na ịkwalite mmasị YouTube n'efu.
Iji tinye ihuenyo ngwụcha, gaa na menu aka ekpe nke Studio Studio wee pịa Ọdịnaya. Họrọ vidiyo ịchọrọ ịgbakwunye na ihuenyo ikpeazụ. Pịa igbe ihuenyo ikpeazụ nke na -egosi n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Ị nwere ike họrọ site na ihe ndebanye aha anọ dị iche iche dabere na ebumnuche gị.
9. Echefula ka gị na ndị na -ekiri gị na -emekọrịta ihe
Inweta mmasị YouTube na -akwụghị ụgwọ chọrọ mbọ gị mgbe niile. Ọ dịghị mfe imeri ndị na -ekiri ọhụụ nyere asọmpi anyị na -ahụ taa. Otu ụzọ dị mma iji rụọ ọrụ na nke a bụ site n'inye ndị na -ekiri gị nlebara anya nha anya. Kwee ka ha chee na ha ji ha kpọrọ ihe na ekele maka inyere gị aka ịbụ onye okike ị bụ. Soro ha na posts gị. Zaghachi ihe ha kwuru. Mara ihe na -amasị ha ma ọ bụ ihe na -adịghị amasị gbasara vidiyo gị.
Mgbe gị na ndị na-ege gị ntị nwere mmekọrịta dị otú ahụ bara uru, ọ na-atụgharị ya ka ọ bụrụ iguzosi ike n'ihe ogologo oge. Mgbe ị nụrụ ntụnye ha ma mee ihe na ha, ọ na -adị ha ka a nụrụ ma metụta ọdịnaya gị karịa. Cheta, ndị na-ekiri obi ụtọ nwere ike iweta ndị na-ekiri site na mgbasa ozi ọnụ na ịkekọrịta ndị enyi ha ọdịnaya gị.
10. Tụlee ihe nkiri na -adọkpụ ka ị hụ ndị na -ekiri gị n'anya
Ịchọrọ ka ndị na -ekiri ọhụrụ gị mara ihe ọwa YouTube gị pụtara n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa? Tinye - Trailers ọwa. Ndị a dị ka ihe nkiri na-adọkpụ nke na-enye ntakịrị nkọwa n'ime ihe ị na-eme yana ọdịnaya ị mepụtara maka ndị na-ekiri gị. Ị nwere ike iji trailers ọwa iji gosi uru ọwa gị. Cheta idobe ogologo n'etiti sekọnd 25 na 30.
Trailer nwere ike ibunye akụkọ akara gị, ebumnuche gị yana ihe ị na -eme atụmatụ ime site na ọwa. Ọ kwesịrị ịdị na -akpali akpali, na -akpa ọchị ma ọ bụ na -enwe mmetụta mmetụta? Ihe ọ bụla masịrị gị ma kwekọọ n'usoro ọrụ gị. Mee ka ọ na -emetụta ya ka ndị na -ekiri ya nwee ike tụgharịa ka ha bụrụ ndị debanyere aha.
11. Mepụta Omenala obere ihe na-adọrọ anya
Thumbnail bụ onyonyo nlele nke na -arụ ọrụ dị ka mkpuchi maka vidiyo gị. Ọ bụ ihe mbụ onye na -ekiri ga -elele mgbe ha bịara na ibe gị. Anyị niile maara, mmetụta mbụ bụ mmetụta ikpeazụ. Yabụ, tinye mbọ gị niile imepụta obere mkpado anya na-agaghị agabiga. Ọtụtụ mgbe, thumbnail vidiyo gị na -abụ ihe na -ekpebi ma onye na -ekiri ọ ga -ahọrọ ịkpọ vidiyo gị ma ọ bụ nke ọzọ site na nsonaazụ ọchụchọ.
YouTube na -emepụtakwa thumbnail ndabara maka vidiyo site na ịwepụ ya nseta ihuenyo na -enweghị usoro. N'ọtụtụ oge, nke a adịghị mma iji kpoo okporo ụzọ na vidiyo gị ma mee ka onye na -ekiri pịa. Anyị na -atụ aro ka ịmepụta thumbnail gị. Hapụ ya ka ọ bụrụ 1280 x 720px dịka ntuziaka YouTube na -akwado.
Pro NDỤMỌDỤ: Ihu na -amụmụ ọnụ ọchị na -elele igwefoto ozugbo yiri ka ọ na -arụ ọrụ oge niile maka ụdị vidiyo ọ bụla.
12. Mee ka ndị na -ekiri nwee mmasị ma ọ bụrụ na ha denye aha na ọwa gị
Anyị mmadụ na -ahụ ihe efu n'anya. 'Gịnị dị n'ime ya maka m?' Nke a na -abụ ihe kpatara mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịme ma ọ bụ ghara ime ihe. N'ụzọ dị ịtụnanya, nke a na -arụ ọrụ dị ka amara maka ịkwalite echiche YouTube gị. Ịchọrọ ịbawanye mmasị YouTube na -akwụghị ụgwọ ma ọ bụ nwee ọtụtụ ndị mmadụ ịza ajụjụ na post gị? Ụzọ nwere ọgụgụ isi bụ ịgba ọsọ. Gwa ndị na -ekiri gị ma ọ bụrụ na ha denye aha na ọwa gị wee kwuo okwu na post gị, ha na -enweta ngwaahịa efu. Ma ọ bụ, akwụkwọ bịanyere aka n'akwụkwọ, ma ọ bụ nnwale nke ngwanrọ gị n'efu. Nweta egwu ahụ?
Mgbe ị webatara ụgwọ ọrụ maka isonye na ọwa YouTube gị, ị nwere ike ịhụ mmụba nwa oge na ọnụọgụ ndị debanyere aha gị yana ntinye aka na mkpokọta. Ozugbo ị nwere mmasị ha, dọta ha na ọdịnaya na -adọrọ adọrọ na -agbanwe agbanwe, ka ha wee bụrụ ndị na -ekiri gị maka ndụ.
13. Gị na ndị okike ndị ọzọ rụkọọ ọrụ iji bulie mmasị YouTube n'efu
Enwere ike nwee ụdị na YouTube nke gị na ya na -arụkọ ọrụ. Ọ ga -ekwe omume na ị nwere ike nwee ndị na -ege ntị. Gini mere ị gaghị eme ka ndị na -ekiri ibe ha nwee mmasị site n'ịjikọ aka na irite uru n'aka ibe gị? Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịrịọ ọkachamara n'ọhịa gị ka ọ gbaa gị ajụjụ ọnụ na ọwa gị. Nke a ga - enyere aka ịkpọbata ndị na - akwado ha na ọwa gị wee bulie ntọala ndị debanyere aha gị. N'otu oge, ndị na -ekiri gị na -amaghị ọkachamara nwere ike ịdenye aha na ọwa ha ma ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ na -emetụta ha.
Mmekọrịta ya na ndị na -eme ihe ike iji nwetakwuo anya anya maka ọwa gị nwere ike bụrụ aghụghọ kacha ochie na akwụkwọ azụmaahịa mana ọ naghị akwụsị ịrụ anwansi ya. Mgbe ndị na -ege gị ntị hụrụ ụdị mmekorita a, ọ nwere ike na -ebutekwu ndụmọdụ ma ọ bụ echiche n'uche ha. Ha nwere ike ịza ajụjụ na post gị wee gwa gị ndị nka ọzọ ha ga -achọ ịhụ ka gị na ya rụkọọ ọrụ.
14. Nna -ukwu YouTube SEO
Nchọpụta Ngọnchọ na -ahụ na ndị mmadụ nwere ike ịlele ọdịnaya gị mgbe ha na -achọ ya site na iji mkpụrụokwu ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ọwa nri na YouTube. Ị mepụtara vidiyo na sandwiches ghere eghe. Kedu ka ndị mmadụ ga -esi hụ vidiyo ahụ ma ọ bụrụ na ịkwaliteghị aha gị, nkọwa ya na iji hashtags dị mkpa? Ngwa SEO dị ka Google Planner na -enye gị ohere ịma mkpụrụokwu kachasị elu nke ndị mmadụ na -eji achọta ụfọdụ ozi.
YouTube SEO na -agba mbọ hụ na ịmeghị vidiyo na isiokwu ọ nweghị onye na -achọ. Ma ọ bụ utu aha na ọ nweghị onye nwere ike ịhụ ya. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi achọta mkpụrụokwu ziri ezi site na iji ngwaọrụ dị n'ịntanetị, mụọ ọwa onye asọmpi gị ma hụ isi okwu yiri ka ọ na -arụ ọrụ. I nwekwara ike iji nchịkọta YouTube iji hụ mkpụrụokwu ga -enye gị nsonaazụ kacha mma.
15. Gbalịa YouTube Live
Vidiyo dị ndụ aghọọla ihe na -ewu ewu ebe a. Ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu dị ka Instagram na Facebook na -enweta atụmatụ a nke na -eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịbanye. Site na nnọkọ Q&A na -atọ ụtọ na webinars ruo nkuzi nkuzi na ngosipụta ngwaahịa, enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike inyocha na ndụ YouTube iji nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu.
Ọkwa njikọ aka na mmata akara nke ị nwere ike wulite na nnọkọ ndụ ka enweghị atụ. Ma ọ bụ mmetụta ndụ ndụ na ihe nkiri vidiyo dị ndụ ma ọ bụ ejighị n'aka na obi ụtọ nke ihe ga-eme, ịkwanye ndụ kwesịrị ịnwale. Tupu ị gaa ndụ, cheta itinye ego na ngwa na ọkụ kwesịrị ekwesị ka vidiyo gị wee bụrụ ọkachamara karịa.
Anyị nwere olile anya na ndụmọdụ ndị a dị n'elu nwere ike ịba uru iji kwalite akara gị na ọwa gị wee nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu. Cheta, ọ nweghị ụzọ dabara adaba maka ịre ahịa vidiyo. Ọ bụ usoro mmụta ka ị na-aga ebe ị ga-eji nwayọ mụta ihe na-arụrụ gị ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ. Ebumnuche imepụta ọdịnaya na -atọ ụtọ ma biputere ya mgbe niile iji wuo ntọala ndị debanyere aha na -eguzosi ike n'ihe. Vidiyo eriri nke otu setịpụrụ na listi ọkpụkpọ iji mee ka ọ dịrị n'ihu. Lezienụ anya n'ịkwalite aha vidiyo gị, nkọwa ya na iji hashtags nke nwere ike ịdọrọ ọtụtụ ndị mmadụ na ọdịnaya vidiyo gị.
Ọ bụrụ na ịre ahịa YouTube yiri ka ọ karịrị gị ike ma ịchọrọ enyemaka ọkachamara, anyị, na YTpals, nọ na ọrụ gị. Anyị nwere ngwaọrụ na nka iji nweta mmasị YouTube n'efu site na-eto ndị debanyere aha gị site na iji usoro SEO kacha mma na usoro ụlọ ọrụ gosipụtara.
Kpọtụrụ anyị maka mkpa ahịa YouTube gị niile. Ndị otu ndị ọkachamara anyị nwere omume enyi ga -enwe obi ụtọ ịmụ maka ihe azụmahịa gị chọrọ ma nye gị azịza nke ịkwa akwa mere nke dabara na mkpa gị.
Ndị na-emepụta ọdịnaya YouTube na ọtụtụ ndị okike ndị ọzọ na-alụ ọgụ iji dọta uche ndị na-ekiri ya. Ịnweta òkè YouTube efu na nkọwa YouTube efu nwere ike isi ike....
Ndị na-emepụta ọdịnaya YouTube na-arụ ọrụ na atụmatụ SEO ha iji kwalite ndị asọmpi ha ma melite ọkwa YouTube ha. Mgbe vidiyo dị elu, algọridim YouTube na-ewerekwa ihe nkiri ...
Site n'iji ike itinye aka na ntughari nke ọdịnaya vidiyo, ị nwere ike imeghe ikike ịre ahịa ika na YouTube. N'ịbụ igwe nchọta nke abụọ kachasị ukwuu, Google nwe...
Jiri mpempe akwụkwọ ngwa ngwa dị n'okpuru
Azụtara m ihe nlere YouTube, mmasị na ndị debanyere aha maka ọwa m ma ha napụtara ihe niile gbakwunyere ụfọdụ ndị na-akwụ ụgwọ n'efu! M ga na-eji YTPals ugboro ugboro!
Daalụ nnọọ YTPals
Daalụ YTPals dị ukwuu, ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ike inye gị kpakpando 10. Ahụrụ m unu niile n’anya, yana ọmarịcha ọrụ unu na-arụ.
Echegbula a nke abụọ!
YTPals, daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị, ị mere ka ọwa m too okpukpu atọ karịa ka ọ dị mgbe m bidoro ịgbalite ọhụụ gị. Amalitere m naanị n'okpuru 100 Ndenye karịa 300 n'ime izu ole na ole!
Sonye na netwọkụ anyị nke ndị nwe ọwa YouTube 500,000 nwere ihe ịga nke ọma na-enweta ndị na - enweta ndị na - akwụ ụgwọ YouTube iji nyere aka na-eto ọwa YouTube ha.
Nweta ndị debanyere aha n'efu ugbu a!